ဂျာမန်မှုန်သို့မဟုတ် Filler စကားအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
Doch! ... နှင့်အခြားလှည်ဂျာမန်စကား
ဂျာမန် အခြားဘာသာစကားကဲ့သို့တစ်ဦးထက်ပိုလမ်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်အထူးသဖြင့်စကားလုံးများနှင့်အသုံးအနှုနျးမြားရှိပါတယ်။ ဤ "မှုန်" သို့မဟုတ်အဖြစ်လူသိများရေတိုပေမယ့်လှည်Wörterပါဝင်သည် "Filler ။ " သူတို့ကိုငါမခေါ် "ကြီးမားသောပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုသေးငယ်တဲ့စကားများ။ "
တကယ်တော့လှည် Are ဒါကရိုးရှင်းတဲ့-ရှာနေဂျာမန်အမှုန်များ
ဂျာမန်ထိုကဲ့သို့သော aber အဖြစ်စကားလုံးများကို auch , denn, doch, ရပ်တန့်, mal, Nur, schon နှင့်ပင် ja ပရိယာယ်ရိုးရှင်းတဲ့ကိုကြည့်ပေမယ့်မကြာခဏဂျာမန်ပင်အလယ်အလတ်သင်ယူသူအဘို့အအမှားအယွင်းများနှင့်နားလည်မှုလွဲတဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြသည်။
aber နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူပါ။ အများစုကတော့ကအဖြစ်ကြုံတွေ့လျက်ရှိသည် ညှိနှိုင်း ဆက်စပ်. aber unser အော်တို IST kaputt, Wir wollten heute fahren in: အဖြစ်။ ( "ကျနော်တို့ယနေ့မောင်း / သွားကြဖို့လိုခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားကိုဖြိုဖျက်နေသည်။ ") ကြောင်းစကားစပ်မှာညှိနှိုင်း ဆက်စပ်. မဆိုနဲ့တူ aber လုပ်ဆောင်ချက်များကို (aber, denn, oder, und) ။ Das IST aber nicht မိန်းအော်တို: ဒါပေမယ့် aber လည်းအမှုန်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ( "ဒါကသို့သော်ဖြစ်ပါသည်, ငါ့ကားကို။ ") ဒါမှမဟုတ်: Das စစ် aber sehr hektisch ။ ( "ဒါကတကယ်အလွန် hectic ခဲ့ပါတယ်။ ")
ထိုကဲ့သို့သောအမှုန်-စကားလုံးဥပမာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေနောက်ထပ်ဝိသေသကဘာသာပြန်ဆိုဖို့မကြာခဏခက်ခဲကြောင်းပင်ဖြစ်သည် အင်္ဂလိပ်စကားလုံးသို့ဂျာမန်စကားလုံး ။ သင်ပထမဦးဆုံးနှစ်ဂျာမန်ဆရာကအမြဲတန်းတူ "ဒါပေမဲ့" မပြောအဘယျသို့ဆန့်ကျင်ဂျာမန် aber,! တကယ်တော့ခုနှစ်, Collins / PONS ဂျာမန်-English အဘိဓါန် aber ၏အသုံးပြုမှုအားလုံးအတှကျတစ်ကော်လံ၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုအသုံးပြုသည်။
အသုံးပြုလျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုပေါ် မူတည်. အဆိုပါစကားလုံး aber ဆိုလိုနိုင်သည်မှာအားလုံး, ဒါပေမယ့်နှင့်, သို့သော်, တကယ်ရုံ, က ?, ယခုသင်သို့မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်ပေါ်လာ ?, ကြပြီမဟုတ်ဘူး။ အဆိုပါစကားလုံးပင်နာမ်ဖြစ်နိုင်သည် Sachs ဦးထုပ် Ein Aber Die ။ ( "ပဲတဦးတည်းရိုက်သွားရှိပါတယ်။ " - Das Aber) သို့မဟုတ် Kein Aber! ( "အဘယ်သူမျှမ ifs, ands သို့မဟုတ် buts!")
တကယ်တော့တစ်ဦး ဂြာမနျအဘိဓါန် ခဲအမှုန်နှငျ့ဆကျဆံရာတှငျအများကြီးအကူအညီပေးထားပါတယ်။
သူတို့ကသငျသညျတော်တော်လေးကောင်းစွာဂျာမန်နားလည်လျှင်ပင်မကြာခဏသူတို့ကိုဘာသာပြန်ဆိုမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒါ idiomatic ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် (နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်လုပ်နေလုပ်နေအရာကိုသိအဖြစ်!) သင့်ရဲ့ဂြာမနျသို့သူတို့ကိုပစ်သင်ပိုမိုသဘာဝအများနှင့်ဇာတိ-ကဲ့သို့မြည်စေနိုင်သည်။
ဥပမာရဲ့နောက်ဥပမာ, အမကြာခဏအသုံးပြုကြသည် Over-mal ကိုသုံးပါစနှေငျ့။ သင်ဘယ်လို wann fliegst du, SAG mal ဘာသာပြန်ဆိုမလဲ သို့မဟုတ်တှကေအသငျ့ sehen ။ ? မအမှု၌အကောင်းတစ်ဦးအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ချက်အမှန်တကယ်အားလုံးမှာ mal (သို့မဟုတ်အခြားစကားများအချို့) ဘာသာပြန်ဆိုနှောငျ့ယှကျလိမ့်မယ်။ "သင်၏ပျံသန်းထွက်ခွာမည်ပါဘူးအခါ, ပြော (ငါ့ကိုပြောပြပါ)?" ဒီလို idiomatic အသုံးပြုမှုနှင့်အတူပထမဦးဆုံးဘာသာပြန်ချက်ပါလိမ့်မယ်ဒုတိယထားသောစာပိုဒ်တိုများအင်္ဂလိပ်လို "ကျနော်တို့မြင်ရပါလိမ့်မယ်" ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါစကားလုံး mal အမှန်တကယ်စကားလုံးနှစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ fünf mal fünf (5 × 5): တစ်ဦး adverb အဖြစ်, တကသင်္ချာ function ကိုရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ဦးအမှုန်များနှင့် einmal တစ်ဦးကိုတိုပုံစံ (တစ်ချိန်က) အဖြစ်, ထို mal အများဆုံးမကြာခဏ Hor mal zu ၌ရှိသကဲ့သို့, နေ့-to-နေ့ကစကားပြောဆိုမှုအတွက်အသုံးပြုသည်နေပါသည်! (! Listen) သို့မဟုတ် Kommt သူမ၏ mal! (ဒီကိုလာပါ!)။ သငျသညျဂြာမနျစပီကာမှဂရုတစိုက်နားမထောငျလြှငျသငျသသူတို့ခဲကဒီမှာရှိနေတဲ့ mal အတွက်ပစ်မရှိဘဲဘာမှမပြောနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှပါလိမ့်မယ်။ (ဒါပေမယ့်နီးပါး၏အသုံးပြုမှုအဖြစ်နာကျင်ကျိန်းစပ်အဖြစ်! အင်္ဂလိပ်လို "Ya ကိုသိ" မင့်) ဒါသငျသညျ (လက်ျာဘက်အချိန်တွင်နှင့်လက်ျာအရပ်ဌာန၌!) တူညီသောကျင့်ကိုကျင့်လျှင်, သင်ရုံဂျာမန်ကဲ့သို့မြည်မယ်!
အဆိုပါဂျာမန်စကားလုံး doch ကြောင့်လည်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အောင်စွယ်စုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်စနစ်တကျဤစကားတော်ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကို သိ. သင်သည်စစ်မှန်သောဂျာမန် (သို့မဟုတ်သြစတြီးယားသို့မဟုတ်ဆှစျဂြာမ) ကဲ့သို့မြည်စေနိုငျပါသညျ!
... ja, nein နှင့် doch: အခြေခံနှင့်အတူစတင်ဖွင့်ပါစေ! ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျအစဉျအမွဲဂြာမနျတွင်သင်ယူပထမဦးဆုံးစကားလုံးများကိုနှစ်ခု ja နှင့် nein ခဲ့ကြသည်။ သငျသညျဂျာမန်လေ့လာပြီးမီဖြစ်ကောင်းသူတွေကိုစကားလုံးနှစ်လုံးသိတယ်! ဒါပေမဲ့သူတို့ကအလုံအလောက်မရှိကြပေ။ သင်တို့သည်လည်း doch ကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။
မေးခွန်းတစ်ခုဖြေဆိုရန် doch များအသုံးပြုမှုအမှန်တကယ်တစ်မှုန် function ကိုမဟုတျပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူကအရေးကြီးပါသည်။ (ကျနော်တို့ခဏတစ်မှုန်အဖြစ် doch ပြန်ရလိမ့်မယ်။ ) အင်္ဂလိပ်မဆိုကမ္ဘာကြီးဘာသာစကား၏အကြီးဆုံးဝေါဟာရရှိစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အဖြေအဖြစ် doch ဘို့တစ်ခုတည်းစကားလုံးမရှိပါ။
သငျသညျအဆိုးသို့မဟုတ်အပြုသဘောမေးခွန်းတစ်ခုဖြေဆိုသည့်အခါ Deutsch သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေ, သငျသညျ, ဟုတ်ကဲ့ / nein / မရှိ, သို့မဟုတ် ja ကိုအသုံးပြုပါ။
ဒါပေမယ့်ဂျာမန်အင်္ဂလိပ်ရှိသည်ပါဘူးအကြောင်း, ( "ဆန့်ကျင်အပေါ်") တတိယတစကားလုံး option ကို, doch ကထပ်ပြောသည်။ ဥပမာ, တစ်စုံတစ်ဦးက "သင်တစ်ခုခုကိုပိုက်ဆံမရှိဘူးလား?" အင်္ဂလိပ်လိုသင်ကမေးတယ်သင်ကတကယ်လုပ်ပေး, သင်ဖြေဆိုဒါ, "ဟုတ်ကဲ့, လုပ်ပါ။ " သင်လည်း add မယ်နေစဉ်, "ဟုအဆိုပါဆန့်ကျင်တွင် ... " နှစ်ခုသာ တုံ့ပြန်မှုများကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှတွေဟာ: "ငါမမ။ " (ဟာအနုတ်လက္ခဏာဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုနှင့်အတူသဘောတူ) သို့မဟုတ် "ဟုတ်ကဲ့, ကြဘူး။ " (ဟာအနုတ်လက္ခဏာဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုနှင့်အတူ disagreeing) ။
ဂျာမန်, သို့သော်အချို့သောကိစ္စများတွင်အစား ja သို့မဟုတ် nein ၏လိုအပ်သောတတိယအခြားရွေးချယ်စရာ, ပေးထားပါတယ်။ ဂြာမနျတွင်တူညီသောပိုက်ဆံဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပါလိမ့်မယ်: မိပြီ du kein Geld? သငျသညျ ja နှင့်အတူဖြေဆိုလြှငျ, မေးခွန်းများကိုဟုတ်ကဲ့, သင်သည်မည်သည့်ပိုက်ဆံရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်း, သင်အနုတ်လက္ခဏာမှသဘောတူကြသည်ထင်လိမ့်မည်။ သို့သော် doch နှင့်အတူဖြေဆိုခြင်းအားဖြင့်, သင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်နေပါတယ်: "ဆန့်ကျင်တွင်, ဟုတ်တယ်, ငါပိုက်ဆံလုပ်ပါ။ "
ဒီအသင်တို့ကိုလည်းဆန့်ကျင်ချင်သောထုတ်ပြန်ချက်များသက်ဆိုင်သည်။ Doch: တစ်စုံတစ်ဦးကပြောပါတယ်ဆိုလျှင်, "ဒါကညာဘက်မဟုတ်ဘူး" သို့သော်ဖြစ်ပါသည်, ဂျာမန်ကြေညာချက် Das stimmt nicht နှင့်အတူဆန့်ကျင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း, Das stimmt ။ ( "ဆန့်ကျင်တွင်, မှန်သည်။ ") ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ja (es stimmt) နဲ့တစ်ဦးတုံ့ပြန်မှုဂျာမန်နားရွက်မှားမြည်လိမ့်မယ်။ တစ်ဦးက doch တုံ့ပြန်မှုရှင်းလင်းစွာသင်ကြေညာချက်နှင့်အတူသဘောမတူဆိုလိုသည်။
Doch အဖြစ်ကောင်းစွာများစွာသောအခြားအသုံးပြုမှုရှိပါတယ်။ တစ်ဦး adverb ကြောင့် "အားလုံးအပြီး" ကိုဆိုလိုတာသို့မဟုတ် "အားလုံးအတူတူပင်။ " နိုငျ ich habe Sie doch erkannt! Das ဦးထုပ် Sie doch gesagt: ဒါဟာမကြာခဏအနေနဲ့ပိုမိုမြှင်အဖြစ်ဤနည်းကိုအသုံးပြုသည် "! ငါသူမ၏အသိအမှတ်မပြုခဲ့တယျ" "! ရှိသမျှတို့ကိုငါပြီးနောက်သူမ၏အသိအမှတ်ပြု" သို့မဟုတ်။ = "သူမသည် (အားလုံးပြီးနောက်) ဟုဆိုကြသည်ကိုပြု၏။ "
ပညတ်တော်တို့ကိုမှာတော့ doch မျှသာမှုန်ထက်ပိုပါတယ်။ Gehen Sie doch vorbei: ဒါဟာတစ်ဦးအကြံပြုချက်ပိုမိုသို့လှည့်ရန်, အမိန့်ပျော့ပြောင်းဖို့အသုံးပြုနေပါသည်!
"အဘယ်ကြောင့်သင်? ခြင်းဖြင့်မသွားဘူး" ထက်ခိုင်ခံ့ "(ကိုသင်ပါလိမ့်မယ်) က go!"
တစ်မှုန်အဖြစ်, doch, (အထက်ကဲ့သို့) express ကိုအံ့အားသင့်ပြင်းထန်လာနိုင်ပါတယ် (Das စစ် doch မာရီယာ! = ဒါကအမှန်တကယ်မာရီယာခဲ့သည်!), ပြပွဲသံသယ (ဒူပြီ doch လိုက်စီအီးမေးလ် bekommen? = သင်တို့သည်ငါ့အီးမေးလ်ကိုရခဲ့တယျ, သငျသညျမဟုတျလော ), ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို (Wie စစ် doch sein အမည် = မိမိနာမအရုံအဘယျသို့ဖြစ်ခဲ့သည်) သို့မဟုတ်အများအပြား idiomatic နည်းလမ်းအသုံးပြု:? Sollen Sie doch! = ထို့နောက်ရုံရှေ့ဆက်သွားရ (နှင့်ထိုသို့ပြု), အနည်းငယ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အတူ, သငျသညျ doch ဂြာမနျတွင်အသုံးပြုသည်သောနညျးလမျးမြားစှာသတိပြုမိရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဂြာမနျတွင် doch ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အခြားအမှုန်ကိုနားလည်ခြင်းသင်သည်ဘာသာစကားတစ်ခုထက်ပိုကောင်းတာကို command ကိုငါပေးမည်။
အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးအဆိုတော်တစ်ဦးအဆိုတော်ကို? - ဆက်စပ်အတွက်စကားထူး
(မိသားစုသေဆုံး) "မိသားစု" အတွက်ဂျာမန် Learn
ဂျပန်နှုတ်ကပတ်တော်ကို Koe Learn
သူက - "သဟဇာတ" - တရုတ်ဇာတ်ကောင်ပရိုဖိုင်းကို
ယာဉ်နှင့်ပို့ဆောင်ရေး၏ mode ကိုများအတွက်တရုတ်စကား
နှိုင်းယှဉ်: အူ, besser, besten ဖြစ်ကြောင်းကို
အီတလီအတွက်ကြိယာ "Uscire" Conjugate လုပ်နည်း
သငျသညျဤအပတေရုသပန် Quotes ကိုသိပါသလား?
အဆိုပါဟစ်စပန်းနစ်အမေရိကန်ပြည်သူ့အင်အားအကြောင်း6စိတ်ဝင်စားဖို့အချက်အလက်နဲ့ကိန်းဂဏန်းများ
နက္ခတ္တဗေဒ 101 - ကြယ်အကြောင်းလေ့လာခြင်း
အဘယ်ကြောင့် Do ခရစ်ယာန်တွေကိုထွန်းအခမ်းအနားကျင်းပ?
Nucleic Acid - ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ရာထူးအမည်
တစ်ဦး DSW ဘွဲ့ဆိုတာဘာလဲ
New Hampshire အတွက်တစ်ဦးက Usonian အလိုအလျောက်မူလစာမျက်နှာ
အခမဲ့သင်ထောက်ကူ: decimal ပြောင်းအပိုင်းအစများ
Erre Moscia: တချို့ကဘာသာဗေဒဒဏ္ဍာရီနှင့် Legends Dispelling
လူမှုဖူလုံရေးမရဏအညွှန်းကိန်းမှ Access ကိုကန့်သတ်
'' အိုခရစ္စမတ်သစ်ပင် '' Chord
အော်စကာ-Winner Sandra Bullock ရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးအခန်းကဏ္ဍ
"အမေရိကန် Pie" အခနျးငယျ3( "အခုဆိုရင်ဆယ်နှစ် ... ") ၏အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ?
Frightfully Funny ဟယ်လိုဝင်းလက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ကာတွန်းများ